सुन्दरहरैंचामा विकास र समृद्धिका विविध कामहरु भएका छन् : नगरप्रमुख ढकाल - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक ०८, २०७८	समय: २२:३५:४४
सुन्दरहरैंचा / सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आए पछि हसिना पर्यटकीय स्थललाई विस्तार गर्दै नेपाल सरकार र नगरपालिकाकाे दाेहाेराे लगानीमा हसिनाकाे स्तर उन्नति हुने काममा ध्यान दिएकाे नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले सञ्चारकर्मीसंगकाे कुराकानीमा उल्लेख गरेका छन् ।
नगर प्रमुख ढकालले नगरमा रहेको बृद्वावन गाैसालालाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रकाे रुपमा विकास र विस्तार गरि रहेकाे उल्लेख गर्दै नगरकाे विभिन्न स्थानमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शाैचालय निर्माण गरेको बताए । उनले दुईवटा शाैचालयकाे उद्घघाटन गरिसकेका छाै भन्दै दुईवटा निर्माणकाे अन्तिम चरणमा पुगेकाे उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका चारवटाकाे याे बर्ष देखि काम अघि बढाउँने याेजनामा रहेकाे जानकारी दिए । उनले सुविधा सम्पन्न कवर्ड हलकाे निर्माण गरेका छाै । खेलप्रतिकाे विकासका लागि खेलग्रामहरुकाे निर्माण गरेका छाै भन्दै यस नगरमा झन्डै ४ बर्षकाे अवधिमा १ सय ६० कि. मि . भन्दा बढी सडक कालाेपत्रेकाे काम सम्पन्न गरेकाे बताए ।
शिवप्रसाद ढकाल : नगर प्रमुख , सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
सयाैकाे संख्यामा कलभटहरु बनाएकाे ढकालले उल्लेख गर्दै धेरै मठ मन्दिरहरुकाे जिर्णाेद्वार गरेका छाै भने । ५० औकाे संख्यामा सामुदायिक भवनहरुकाे निर्माण गरेका छाै । किसान तथा सानाे जन्मिएकाे बच्चा देखि लिएर सुत्केरी सम्मका लागि र सबै वर्ग अनि क्षेत्रलाई समेटेर विशेष कार्यक्रम परिचालन गरेकाे नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । एउटा सुत्केरी महिलालाई भिटामिन चक्की , पाेष्टिक आहार र आयाेनुन देखि लिएर कृषकहरुलाई निशुक्क घासकाे बीउका साथै धान , मकै, गहु, ताेरीकाे बीउ सम्म प्रदान गरिरहेकाे साथै गाई , भैंसी , बाख्रा ,सुँगुर पाल्न चाहाने मेहेनती कृषकहरुकाे लागि अनुदानकाे व्यवस्था मिलाएकाे ढकालले बताए । सागसब्जी खेती गर्न चाहानेहरुका लागि पकेट कार्यक्रम घाेषणा गरेका छाै उनले भने । सब्जीकाे लागि किटहरु निशुल्क रुपमा बाडी रहेका छाै । जेष्ठ नागरिकहरुलाई १० मिनेट भित्रमा सुरक्षित सामाजिक भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएकाले नगरकाे बाहैं वडामा जेष्ठ नागरिक चाैताराहरु निर्माण गरेका छाै ढकालले भने । उनले जेष्ठ नागरिकहरुलाई तिर्थस्थानकाे व्यवस्था मिलाएकाे बताउँदै महिला दिदिबहिनीकाे आङ खस्ने तथा पाठेघरकाे क्यान्सरकाे निशुल्क शिविरहरु संचालन गरेकाे उल्लेख गरे । किसानहरुलाई बाेरीङ ,पप्पसेठ दिने देखि लिएर विपतमा मच्छड , किरा मार्ने देखि नगरमा धेरै कामहरु युद्वस्तरमा गरिरहेका छाै ढकालले भने ।
आफु नगरमा आउँदा विजुलीकाे भाेल्टेजकाे समस्या थियाे भने अहिले हामीले ४ बर्षमा ३४ वटा टास्सफर्महरुकाे व्यवस्थापन मिलाएका छाै नगर प्रमुख ढकालले बताए । सकेसम्म समग्र क्षेत्रमा नगरपालिकाले ध्यान दिएकाे उनकाे भनाइ रहेको छ । ढकालले नगरमा वरुणयन्त्रकाे पहिलाे बर्षमै संचालन गरेकाे उल्लेख गर्दै घरदेखी घाट सम्मकाे व्यवस्था गरेकाे समेत बताए । पहिले उत्तरी माेरङकाे ८ वटा पालिकालाई हेर्ने गरेर सुन्दरहरैंचामा वरुण यन्त्र थियाे । अहिले केहि पालिकाले वरुणयन्त्र किन्दै गरेको अवस्था छ भने केहीले संचालनमा ल्याएको जानकारी दिए । हामी कहाँ फाेहाेर उठाउने ४ वटा गाडीकाे व्यावस्था मिलाएका छाै ढकालले भने । सबै पालिकाले फाेहाेर उठाएकाे पैसा लिन्छ तर हाम्रो नगरमा चहिं निशुल्क गरेका छाै भन्दै यस बर्ष देखि रकम उठाउने व्यवस्था मिलाएकाे बताए । २२ प्रकारका करहरुकाे छुटकाे लागि व्यवस्था मिलाएका छाै । खेतियाेग्य जमिनमा आधा कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएकाेले सरकारीलाई हर्जनामा छुटकाे व्यवस्था मिलाएकाे ढकालले बताए । उनले उद्योगी व्यावसायीहरुलाई हर्जनामा लाग्ने छुटकाे व्यवस्था मिलाएकाे समेत उल्लेख गरे ।
नगर प्रमुख ढकालले काेविडका कारण नगरकाे विकास निर्माणमा धेरै ठूलाे असर परेको बताउँदै जसबाट आर्थिक रुपमा अझै ठूलाे समस्या परेकाे बताए । नगरलाई समृद्व बनाउँने पहिलाे आधार भनेकै सडक रहेको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख ढकालले सडक सञ्जालकाे विस्तार गरेर सहज ढंगले एउटा कुनाबाट अर्को कुना सम्म पुग्ने सक्ने खालकाे वातावरण मिलाउँन सकियाे भने अझै विकास हुने धारणा राखेका छन् । नगरमा दाेस्रो शान्ति सुरक्षा रहेको बताउँदै तिनकाे यथाेचित व्यवस्थापन गरिरहेकाे ढकालले उल्लेख गरे । चाहे त्याे निजि हाेस वा सामुदायिक क्याम्पसकाे विकास र उन्नयनका निम्ति काम गरिरहेका छाै। विश्वविद्यालयकाे विकासका लागि विशेष चासाे दिएर काम गरि रहेकाे नगर प्रमुख ढकालले उल्लेख गर्दै समग्र विषयमा सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले आफ्नाे गतिविधिहरु अघि बढाइ रहेको जानकारी दिए ।
नगर प्रमुख ढकालले सुन्दरहरैंचा नगरपालिका प्रदेश १ काे केन्द्रकाे रुपमा विकास भै रहेको उल्लेख गर्दे यहाँ १४ जिल्ला मात्र हाेइन बाहिरका मानिसहरु पनि बसाेवासका लागि आएकाे जानकारी दिए । अन्य बाैद्विक वर्गका मानिसहरुले पनि यस क्षेत्रलाई बसाेवासका लागि छनाेट गरेका कारण यहाँको विकास निर्माणमा सहज भएको नगर प्रमुख ढकालकाे भनाइ रहेको छ । पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक हिसाबले धेरै सम्भावना बाेकेकाे र महत्त्वपूर्ण ठाउँहरु भएका कारणले पनि सुन्दरहरैंचा नगरकाे महत्त्व बढेको साथै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय , सुकुना बहुमुखी क्याम्पस यहाँ अवस्थित रहेको जानकारी दिए । प्रमुख ढकालले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र वृद्वावन गाैसालाकाे स्तर उन्नती हुदै गरेको जानकारी दिदै सिमसारकाे हिसावले हसिना र बाघझाेडा सिमसारकाे मुहार फेदै छाै भने । धेरै महत्त्वपूर्ण याेजनाहरु भएका कारणले यस नपाकाे महत्त्व स्वाभाविक रुपमा राम्रो भएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिदै नगर सहकारीकाे खानी हाे भने । धेरै सहकारीहरु छन् बैकहरु छन् भन्दै नगर प्रमुख ढकालले मान्छेकाे आकर्षणकाे केन्द्र भएकोले यहाँकाे वातावरण र सामाजिक पक्ष समेत राम्रो भएको बताए ।
ब्राइट फ्यूचरमा क्याप्टन तथा सहायक क्याप्टन छनाेटका लागि निर्वाचन सम्पन्न
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको प्रमुखमा केदारप्रसाद गुरागाईं तथा उप प्रमुखमा अकली चाैधरी विजयी
गठबन्धनलाई पछि पार्दै सुन्दरहरैंचामा एमालेले लियाे अग्रता
विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा नागेश र उपमेयरमा शिल्पा विजयी
सुन्दरहरैंचा दर्पण लोकार्पण
नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घकाे चाैथाे प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न
सुन्दरहरैंचामा अनलाइन सेवा मार्फत राजस्व भुक्तानी शुरु
साजीलाल माविमा २ कराेड भन्दा बढीकाे कवर्डहल निर्माणका लागि शिलान्यास
प्रिस्काकाे परिवारलाई आर्थिक सहयाेग जुटदै
सुन्दरहरैंचामा सुकुना माविकाे विविध कार्यक्रम सहित स्वर्ण महोत्सव समापन